"Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesôsy ho anareo" - Tes. 5:18.
Maro loatra ny ahiahy tsy misy dikany sy ny saina mikorontana manoloana ny tranga tsy misy fanafana. Asain'ny Tompo apetraky ny zanany Aminy ny fitokiany iray manontolo. Andriamanitra mahitsy sy marina ny Tompontsika. Tokony hankasitrahan'ny zanany ny hatsarany sy ny fahamarinany, ao anatin'ny tranga madinika sy lehibe eo amin'ny fiainana. Manda ny tanany izay mitari-dalana ny olona mikolokolo fanahy feno ahiahy sy fitarainana. Hadalana ny fitaintainana tsy misy dikany; ary manakana antsika tsy hijoro amin'ny tena maha-isika antsika manoloana an'Andriamanitra izany.
Rehefa mitoetra ao anatin'ny saina ny Fanahy Masina, dia tsy hisy faniriana hitaraina na himonomonona noho ny tsy fahazoantsika izay rehetra irintsika; fa hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo aza isika noho ny fitahiana noraisintsika. Tokony hahay misaotra kokoa ireo mpiasantsika amin'izao fotoana izao, ary tsy ho vonona hiditra any amin'ny fonenana any amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy ireo raha tsy efa manana izany fanahy izany. Misy asa lehibe tokony hotanterahintsika tsirairay avy. Kely fotsiny ihany amin'ny asa tian'Andriamanitra hotanterahina amin'ny alalantsika no takatry ny saintsika. Tokony hiezaka hamantatra ny haben'ny drafitra napetrany isika, ary handray tombontsoa avy amin'ny Iesona tsirairay noezahiny nampianarina antsika.
Fitondran-tena maro tsy mendrika mihitsy no voavolavola ao anatin'ny fontsika sy ny saintsika rehefa miezaka mandeha araka ny lalantsika izay mifanohitra amin'ny lalan'ny fahatsaram-panahy isika. Amin'io tranga io indrindra no mahalavo ny maro. Tsy kolokolointsika ao anatintsika ny fahatsaram-panahy; tiantsika ho tonga mora foana amintsika ny zava-drehetra. Ny fanontaniana manan-danja indrindra mipetraka amintsika tsirairay avy anefa dia tsy tokony hoe: ahoana no fomba hanatanterahantsika ny drafitra napetratsika manoloana ny drafitry ny hafa, fa hoe kosa: ahoana no hananantsika hery hivelomana ho an'i Kristy isan'andro. Tonga tety an-tany i Kristy ary nanolotra ny ainy mba hahazoantsika famonjena mandrakizay. Tiany hiaina ao anatin'ny rivo-piainan'ny lanitra avokoa ny tsirairay avy amintsika, mba hanomezantsika ohatra manome voninahitra ny fivavahan'i Kristy eo anatrehan'izao tontolo izao. LLM, 602.